Cudurka Daacuunka oo 7-Caruur ah ku Dilay Dhadhaab – Radio Daljir
Diseembar 17, 2015 4:17 b 0
Somalia, December 17, 2015-(Daljir)_7 qof ayaa la xaqiijiyey inay cuddurka Daacuunka ugu geeriyoodeen Xeradda Dhagaxley, iyadoo 541-kalena la xanuunsan yihiin Cuddurkaasi Saf-mareenka ah.
Madaxa Ergadda Hay’adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudka Lahayn ee MSF u jooga dalka Kenya, Charles Gaudry ayaa sheegay in ku-dhawaad 30% dadka uu soo ritay cuddurkaasi yihiin carruur ay da’dooda ka hooseyso 12-jir.
Roobab Mahiigaan ah oo ka da’ay Xerooyinka Xagar-dheere iyo Dhadhaab iyo Nadaafad-xumida jirta ayaana loo aanaynayaa inuu cuddurka Koleeraha ka dillaaco.
Charles Gaudry waxa kaloo uu sheegay inaysan jirin Maalgelin Waqtiga dheer ee Adeegyadda Caafimaadka iyo Faya-dhowrka ee Xerooyinka Qaxootiga.
Isbitaalladda ayaa la sheegay inay buux dhaafiyeen carruur uu ku dhacay Daacuun Caloolaha iyo kuwo ay hayso Nafaqo la’aan.
Bishii November ee la soo dhaafay 23-dii ayaa waxaa si rasmi ahaan loo caddeeyey inuu cuddurka Koleeraha ka dilaacay Xeradda Dhadhaab oo ay ku nool yihiin in ka badan 500,000 oo Qaxooti u badan Soomaali.